जहिले पनि सबलहरूले शक्तिलाई कमजोरहरूका सुरक्षार्थ प्रयोग गर्नुपर्छ ! - लण्डन काठमाडौँ
नेपाल समाचारMarch 31, 2020
जहिले पनि सबलहरूले शक्तिलाई कमजोरहरूका सुरक्षार्थ प्रयोग गर्नुपर्छ !
जतिबेला चिनले विश्वलाई सजग रहन र आफ्ना नागरिकहरुलाई सुरक्षित राख्न आग्रह गरिरहेको थियो त्यति नै बेला महामारीको संवेदनशिलता बुझिदिएको भए सायद विश्वले आजको अवस्था भोग्नु पर्दैन थियो होला । कुनै पनि महामारी या रोगसँग राजनीति फाइदाको खेल खेल्नुको परिणाम के हुन्छ आज प्रमाणित भैसकेको छ । विश्व जुन रुपमा महामारीको कहरसँग जुध्दै छ । यसले गरिब र कमजोर राष्ट्र मात्र नभै शक्तिशाली राष्ट्र पनि आहत छन् । गरिब अर्थतन्त्र र कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली भएको देशमा महामारिकै बिचमा सरकार नै लुटतन्त्रमा व्यस्त छ भन्ने सन्देश विश्व बजारमा देखिन थालेको छ । चीनबाट सहुलियत मुल्यमा ल्याएका पिपिइ सामानमा सरकारले चरम भ्रष्टाचार गरेको समाचार विभिन्न मिडियाद्वारा छताछुल्ल भै सकेको अवस्था छ । विश्वले आफ्ना नागरिकलाई कसरी कोरोना संक्रमणबाट बचाउने भनेर दिमाग खियाउँदै गर्दा मेरो देश नेपाल सरकार सुटुक्क जनताको आँखा छली भ्रष्टाचार कसरी गर्ने भनेको देख्दा यो भन्दा लाजमर्दो र दुःखदायी अवस्था सायदै कसैले भोग्नु पर्ला । कठै हामी जनता अनि बिचरा गरिब मानसिकता बोकेको सरकार लुट्न त लुटिरहेकै थियौ तर यस्तो अवस्था जुनबेला विश्व नै रोइरहेको छ । लुट्न पनि सहि समय मिलाएर लुटेको भए हुन्थ्यो सायद । उनिहरुलाई लागेको हुनसक्छ कमाउने सहि समय बेला यहि हो । चिनबाट नेपालमा सहयोग स्वरुप सहुलियत मुल्यमा पठाइएको पिपिइ सामग्री मध्येमा ल्ढछ माक्सको मूल्य नेपाली रुपैया द्दडण् छ त्यही माक्सलाई नेपाल सरकारले छछघ रुपैया बढाएर लगभग डण्ण् रुपैयाँको हाराहारिमा बेच्न तयरिमा छ । छण्ण् रुपैया तोकेर चिनले पठाएको रोतेक्टिभ गगल्स चस्मालाई नेपाल सरकारले मात्र द्दज्ञछद्द को बिल बनाएको छ । यतिले मात्र सरकारको भुँडी भरिएको छैन । दातृराष्ट्रहरुले हामिलाई खर्बौ रकम सहयोग गरेका खबर छन् तर कहाँ कसरी के प्रयोजनमा खर्च भयो वा सकियो थाहा छैन । यो अवस्थामा आएको रकम सरकारमा रहेकाको भुँडी भर्न होइन मजदुर गरिब किसान जो बिहान बेलुका आफ्नो गुजारा टार्न मजदुरि गर्छन् उनिहरुको लागि हो । लज्जाबोध नभएको विवेकहीन नकचरो जस्तो व्यवहार यति बेला सायदै संसारको कुनै सरकारले देखाउलान् । यो लक्षण हेर्दा सरकारले जनतालाई भोकभोकै मार्ने दिनको सुरुवाती पो होकि भन्दै आशंका गरिरहेका छन् जनताहरु । मलाई यतिबेला सरकार विरुद्ध नकारात्मक कुरा बोल्ने रहर फिटिक्कै थिएन यद्दपी म आम जनता त्यसमा पनि सचेत जनता भएको कारण बोल्नै पर्छ भन्ने भयो र बोल्दै छु । यो विषम परिस्थितिमा हामी सरकारको सहि कदमलाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न पनि चुक्दिन र गलत कदमको खुलेरै बिरोध गर्न सक्ने मुटु छ पनि । एक पटक गम्भीर भएर सोचौं न यदि हाम्रै छिमेकी राष्ट्र चीन सरकार हाम्रो सरकार जस्तै लज्जाबोध गर्न पनि लाज लाग्ने जस्तो भैदिएका भए अनुमान गरौं आज चिनको स्थिति यति भयावह हुन्थ्यो कि जसले विश्वकै अवस्थालाई खल्बल्याइ दिन्थ्यो । यस्तो विषम परिस्थितिमा चीनको सम्यता धैर्यता मानवीयता अमेरिका र युरोपेलीमुलको मुर्खताले विश्वमा कस्तो प्रभाव पर्दैछ र कस्तो सन्देश प्रवाह हुँदैछ संक्षिप्तमा बताउन चाहन्छु ताकि नेपालको आँखा खुलोस् ।
विज्ञान अनि चेतनाको स्तर निकै माथी उठेको भनिएका पश्चिमा देशहरुले किन सहजरुपले यो संक्रमणलाई रोक्न सकेनन् । अमेरिका जसले विश्वको शक्तिशाली मुलुकको उपमा पाएको छ उसको अवस्था हातबाट बाहिर गइरहेको छ । मिसाइल बनाउन ब्यस्त अमेरिकाले कहिल्यै ज्ञण् रुपैयाँ पर्ने एन्टीबायोटिक र माक्स बनाउन ध्यान दिएन । विश्वकै सबैभन्दा प्रख्यात सामाजिक संजाल फेसबुक ट्वीटर अनि विश्व हल्लाउने संयन्त्र बनाउने अमेरिका त्यही ज्ञण् रुपैयाँको औषधी र माक्सको अभावमा लाखौ जनता संक्रमणको जोखिममा मर्न बाध्य छन् । करोडौंका मेडिकल इक्वीपमेन्ट बनाउने स्वस्थ्यमा दखल राख्ने अमेरिका, युरोपका जनता यतिबेला भकाभक मर्दै छन् । उतिबेला चीनमा फैलिरहेको महामारी बारे चीन सरकारले विश्वलाई सचेत हुन आग्रह गरिरहेको थियो । स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान्छ भन्ने बुझेको चीन सरकारले अफ्नो देशमा लकडाउन गर्यो । चीन सरकारले आफ्ना जनतालाई नआत्तिन आग्रह गर्दै रातदिन एक गरि स्वस्थ्यकर्मी, सन्चारकर्मी, सरकार अहोरात्र खटिरह्यो फलस्वरूप स्थिति काबुमा लियो चीनले । उता अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चाइनिज भाइरसले आफू र आफ्नो देशलाई छुन सम्म नसक्ने भन्दै खिल्ली उडाइरहे । अझ चीनले विश्वलाई सिध्याउन लागेको आरोप लगाइरहे । जतिबेला अमेरिका युरोपेली मुलुक एक थिए त्यति बेला चिन लगभग एक्लै थियो । चिनबिरुद्धमा भ्रामक समाचार घन्किरहेको बेला चीनले महामारी नियन्त्रणको प्रयासमा अहोरात्र खटिएर देश र जनतालाई आश्वावासन बाँड्दै सान्त्वना दिदै खटिरहेको थियो । जुनबेला चीनले पूरा विश्वलाई चिच्याइ चिच्याइ यसको संवेदनशिलता बताइरहेको थियो । शक्तिसम्पन्न देशहरुलाई जतिबेला चिनले सजग रहन र आफ्ना नागरिकहरुलाई सुरक्षित राख्न आग्रह गरिरहेको थियो त्यतिनै बेला माहामारिको संवेदनशिलता बुझिदिएको भए सायद विश्वले आजको अवस्था भोग्नै पर्दैन थियो होला । कुनै पनि महामारी या रोगसँग राजनीति फाइदाको खेल खेल्नुको परिणाम के हुन्छ आज प्रमाणित भैसकेको छ । विश्व महामारिको कहरमा जुध्दै गर्दा विश्वनै कमजोर र निरीह भएका छन् । यहाँ को शक्तिशाली, को अल्पविकसित, को विकसित । सबै एकैनासले पिल्सिरहेका छन् ।
अमेरिकामा संक्रमीत संख्या बढदैछ । स्थिति नियन्त्रणमा आउन सकिरहेको छैन । यस्तो विषम परिस्थितिमा अमेरिकालाई चीन सरकारले सहयोग गर्ने र विश्वका नगरिकको सुरक्षार्थ सक्दो सहयोग गर्ने बताइरहँदा अमेरिका चीनको सहयोग नलिने कुरा घमन्डका साथ बताइरहेको छ । यो दम्भको परिणाम घातक हुनसक्ने बिज्ञहरुको भनाइ छ । यस्तो भयावह अवस्थामा जतिसुकै दुश्मनी भएका राष्ट्रहरुले पनि आफ्नो नागरिकलाई बचाउन सहयोग लिनुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रपति ट्रम्प्ले चीनको सहयोग चाहिदैन भन्नू मुर्खतापुर्ण अभियक्ती हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । जुन यतिबेला अमेरिकी जनता निरीह भै चुपचाप आफ्ना रास्ट्रपतिको लज्जास्पद अनि बेतुक्को घमण्डले चुर भएको अभिव्यक्ति सिरोपर गर्दै महमारीसँग जुध्न बाध्य छन् ।
कोरोना देखिएको चीनको संयमता र धैर्यता, नागरिकहरुको अनुशासनको कारण यतिबेला मानविय संवेदना बचाइ रहेको छ । चीनले रोगसँग राजनीति गरिरहेको छैन बरु आफ्ना देशका नागरिक मात्र नभै विश्वका नागरिक बच्नु अनि बचाउनु पर्छ भन्ने मानविय संवेदनशिलता देखाइरहेको छ । जुन सन्देशलाई विश्वका राष्ट्रहरुले सम्मानजनकरुपले शिरोपर गरिरहेका छन् । आफू शक्तिशाली हुँदा कमजोरलाई अथवा आपत्तिमा परेकालाई कसरी मानवियता देखाउने ? शक्ति भनेको जहिले पनि आफू भन्दा कमजोरको सुरक्षार्थ प्रयोग गर्नु हो भन्ने सन्देशमूलक पाठ चीनले विश्वलाई पढाएकोे छ ।
चीनले हरेक पटक छाती चौडा गरी विश्वलाई सहयोगी हात फैलाइरहँदा हाम्रो जस्तो रेमिटेन्समा भर पर्ने कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशमा पिपिइ सामग्रीमा सरकार नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि नेपाली नागरिकमाझ सरकारप्रतिको विश्वास पूर्णरुपमा हटेको छ । लगभग नेपालमा द्धछ५ नागरिक मजदुर छन् । बिहान बेलुका मजदुरी गरेर गर्जो टार्ने गर्दछन् । लकडाउनको पूर्ण पालना गरेका ती मजदुर किसान श्रमिकहरुले राज्य अनि सरकारबाट कस्तो अपेक्षा गर्ने ? भन्ने प्रश्न यतिबेला नेपाली नागरिकको अबोध मनमा छाइरहेको छ ।
नेपाललाई थुप्रै शक्तिशाली राष्ट्रहरुले खर्बौ सहयोग गरेको समेत विभिन्न संचारमाध्यमहरुमा आइरहेका छन् तर नागरिक भोकभोकै पिल्सिएको सामाजिक संजालमार्फत आएका छन् । सरकारको भूमिका या दायित्व आफ्ना नागरिकलाई संयमतापूर्वक सम्झाउँदै सम्हाल्दै सान्त्वना दिँदै सुरक्षित राख्नु हो नकि लुटतन्त्र मच्चाएर । यहि हो लुट्ने बेला भन्दै ब्रम्हलुट गर्ने । सरकार यतिबेला हरेक कदममा संवेदनशिल बन्नै पर्छ । त्यसैले सरकारको सहि कार्यलाई सम्मान गर्दै गलत कदमको घोर भत्र्सना गर्नु र सच्याउँदै अगाडि बढ्न सुझाउनु हामी सबै जिम्मेवार नागरिकको दायित्व हो ।
लेखकः प्रमिला शर्मा भुसाल ‘पुजा’ विभिन्न नर्सिङ कलेजमा अध्यापन कार्यमा संलग्न, सेभ द माइण्ड नेपालकी अध्यक्ष, सञ्चारकर्मी, मजदुर एकता समाजकी महासचिव समेत हुनुहुन्छ)